Dubartiin Sawudii irraa Finfinneetti imalaa turte xiyyaara keessatti lakkuu deesse - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Ethiopian Embassy- Eritrea
Jannat Huseen Ahimed jedhamti. Sawud Arabiyaa Madinaa jiraatti. Sanbata darbe Daandii xiyyaaraa Saawudiitiin Madinaa irraa kaatee gara Finfinnee imalaa turte yoo wanti hineegamne ishee mudatetti.
Karooorri ishees, Jiddaarra darbuun gara Finfinnee dhuftee maatii ishee biratti da'uuf ture. Haa tahu malee xiyyaarri isheen ittiin deemaa turte qilleensuma irra osoo jiruu miixuun ishee jalqabe.
Jannat kan isheen gara maatii ishee deemaa turtes dahumsaaf yoo tahu, ulfa ji'a saddetii turte. Imala isheen duras ogeessi fayyaas ishee ilaaleera. Guyyaan dahumsaashe ganaa ta'u mirkanneessaniif.
Ta'us garuu xiyyaara keessatti lakkuu deesse. Haala tures haala kanaan BBCtti himte.
Jannat Huseen Ahmed, "Sawudii irraa yeroo kanuu nagaan ture. Yeroon koo waan hin geenyeef biyya kootti galeen daha jedheen yaade ture. Garuu ji'a saddeettaffaa koottan da'e.''
Torban darbe kamisa mana yaalaa dhaqee yemmuun ilaalame yeroo kee hin geenyee naan jedhanii turani kan jettu Janneeti, qoricha naaf kennanis utuu hin balali'iin bufata xiyyaaratti fayyadamushee himti.
''Madiinaa irraa jiddaa yeroo deemnutti wanti ta'e natti dhaga'amu jalqabe. Jiddaa qubannee waan dabarruuf achitti homaa hin dubbanne.''
Haa ta'u malee xiyyaara Jiddaa gara Finfinnee balalii'u saananii imala akkuma eegalaniin dagiiga 20 ta'u keessatti ciniinsuun itti hammaannaan hiriyyoota ishee waliin turaniitti himu dubbatti.
Doktoroota lakkuu: Iyyerusaalem fi Qaalkidaan
Achumaanis kessumisitoota xiyyaaraa akka gargaaraniif waamaan jetti.
Osuma isaan gargaaraa jiranu battalamumattis bishaan bubbeekoo dhangala'e. ''Mucaa koo iisheen jalqabaa utuu xiyyaarri qilleensarra jiruu dhalattee, isheen lammattaa immoo kan dhalatte xiyyaarri lafa ga'ee osoo guttummmaatti hin dhaabatiin ture,'' jechuun haala isaa himti.
Kan natti dhaga'ame dhugumaan hanga ammaatti abjuu natti fakkate kan jettu Jannat, ''Abbamanaan koo Saudi jiru jalqaba yeroo dhaga'e nahee ture sana booda garuu dhalachuu isaanitti gammade.''
''Mattiin koo qilleensaratti deessee jechuu yeroo dhaga'ani baayye na'an. Ammayyuu kunuunsa ga'aa hin qabdu jedhanii yadda'aa jiru.
Dhugaa dubbachuuf garuu karaa hunda ani kunuunsa gariin argachaa jira. Karaa embassaafi karaa mana yaliittiniis na gargaaraa jiru. Kun immoo kan ta'u danda'e nagaan biyyoota lamaan jidduutti waan bu'ee jiruufi. Utuu nagaan hin jiraanne akka durii utuu ta'ee ani yoona du'en ture jechuudha."
Jannat kana dura ilam tokkoo fi ijoollee dubaraa sadii kan qabdu yoo ta'u amma al tokkootti ijoollee dubaraa lama argachuus dubbattee jirti.
'Boqonnaan dahumsaa dheerachuun carraa hojii dubartootaa miidha'
Imbaasii Itoophiyaa Asmaraa jirutti barreessaa lamaffaa kan tahan Obbo Zarihun Magarsaa akkuma miixuun ishee jalqabeen paayileetichi to'attota daandii qilleensaa Eertiraa dubbisuun waan isaan mudate itti himuun qubachuuf gaafate jedhan.
Isaanis eeyyamaniifii yeroo xiyyaarichi bu'us anbulaansiin qophaa'ee ishee eeguun gara hospitaala guddicha Horotaa jedhamuu galte jedhan.
Achittis kutaa dahumsaa galuun wal'aansi akka godhameefii BBCtti himaniiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa Asmaraa jirus akka nagaatiin hiikamte nutti hime jedhan.
Ji'a sagal osoo hin guutiin waan dhalataniifis daa'imman dhalatan yaalii argachaa akka jiran himan.
Haala fayyaa haadha deessee fi ijoollee ishee ilaalchisuun Eertiraa hospitaala Horotaa keessa kan hojjetan hakiimni yaalii ijoollee Dr Zemikaa'el Uqubee, haati deesse fayyaa gaarii irratti akka argamtu himanii daa'imni tokko fayyaa guutuu irratti argamti jedhan.
Ijoolleen lakkuu yeroo tahan gadameessa keessatti soorata waan wal saamaniif isheen tokko hanqina dhiigaa xiqqoo qabdi ture jedhan.
Kanaaf yeroo hospitaala galchan fayyaanshee gaarii akka hin turre hiamnaii yaalii taasifamaa fi jiruun amma fooyya'aa dhufuu BBCtti himaniiru.
Adunyaa irratti Ijoolleen soreessaas hiyyeessas miti.Loogii hin beekan.Namoota siyaasaas miti''Dr Zemika'el Uqubee. Kanaaf lammiin biyya biraa tokko akka tasaa dhuftee nu biratti wal'aanamuunshee hedduu nu gammaachiisa jedhan.
Yaalii kennamaa jiruun yoo sirriitti fooyya'u gara biyyaa akka deemtuuf ni baasna jedhan Dr Zemikaa'el. Itoophiyaa fi Eertiraan waggoota 20 oliif erga addaan citanii turanii booda tumsa MM Abiy Ahimed fi Isaayas Afewarqiin gara dippilomaasii gaarii ijaarrachuutti galaniiru.
Ijoollee lakkuu abbaa lama irraa; attamiin ta'uu danda'e?
Iyyerusaalem Getaahun fi Qaalkidaan Getaahun: Doktoroota lakkuu
Jaakiindaa Ardern dubartii osoo aangoorra jiruu mucaa godhatte lammaffaa taatee